Running Man Myanmar Subtitles: October 2016
ယှဉ်​ပြိုင်​​ဆော့ကစား ကြယ်​ပွင့်​များ (အပိုင်း ၂၆၁)
ဒီအပိုင်းကတော့ ၂၆၀ ရဲ့အဆက် ဒုတိယပိုင်းလေးပါ ဒီအပိုင်းလေးကတော့တကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားခြောက်ခြားမှုတွေနဲ့အပိုင်းလေးပါ ရှေ့အပိုင်းကိုကြည့်ပြီးမှကြည့်သင့်ပါတယ် ဒီအပိုင်းမှာတော့ အဖွဲ့ဝင်​ တွေ
ဧည့်သည်တွေနဲ့ VJ တွေပါ စိတ်လှုပ်ရှားပြီးဆော့ရတဲ့အပိုင်းလေးပါ
ပြိုင်ပွဲမစခင်မှာ တော့ နှစ်၅၀ ပြည့်တာရော သြဂုတ်လမှာဖြစ်တဲ့အတွက်
သြဂုတ်လမွေးနေ့ရှင် runner ၃ ယောက်အတွက် suprite party လေး
လုပ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ် မစ်ရှင်တွေစကတည်းက သူတို့ မှာ နာမည်ကတ်တွေမပါခဲ့ပါဘူး ကစားကွင်းကြီးတစ်ခုလုံးအမှောင်ချပြီး အရမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့
အဆောက်အဦးထဲကို နှစ်ယောက်တစ်တွဲဝင်ပြီး နာမည်ကတ်တွေရှာရတာ
နာမည်ကတ်တွေတွေ့မှ အိမ်ပြန်ခွင့်ရှိမှာပါ ကဲ ဘယ်သူတွေက အိမ်ပြန်ရမလဲ ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကြုံတွေ့ရမှာလဲဆိုတာတော့ ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ပါအုံး
(monday couple Moment လေးလည်းပါတယ်သက်လား)
Translate by Sai Kyaw Lin (SKL)
ယှဉ်​ပြိုင်​​ဆော့ကစား ကြယ်​ပွင့်​များ အပိုင်း ၂၉၅
Guest-Park Seo Joon, Moon Hee Jun, Kyuhyun (Super Junior), Lee Yo Won, Choo Seok
ဒီအပိုင်းရဲ့ နာမည်လေးက I am sorry, I love you ပါ
ဒီအပိုင်းဟာ အရမ်းကိုထူးခြားတဲ့အပိုင်းလေးပါ guest တွေနဲ့တစ်နေရာထဲမှာစုပြီးကစားရတာမဟုတ်ပဲ တစ်ယောက်ချင်းစီနဲ့ တစ်နေရာစီမှာကစားရတာပါ ဒီအပိုင်းက ကစားတယ်ဆိုတာထက် ခံစားချက်တွေထုတ်ပြောပြီးရင်ဖွင့်ရတဲ့အပိုင်းဆိုရင်ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်
စာရွက်ပေါ်မှာရေးခိုင်းပြီး သီးသန့်အခန်းလေးတွေလုပ်ပြီးရင်ဖွင့်စေပါတယ် တကယ်ကိုမျက်ရည်ကျရတဲ့အပိုင်းလေးပါ ဒီအပိုင်းလေးကိုကြည့်ပြီးရင်
runner တွေဘယ်လောက်ပင်ပန်းတယ် ဘယ်လိုတွေအနစ်နာခံခဲ့ကြတယ် ဘယ်လိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရလဲဆိုတာခံစားမိမှာပါ
Gary နဲ့ Haha ရင်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တောင်းပန်
စကား​ပြောဆိုပြီး ပြီးသွားပေမယ့် Jae suk နဲ့ရင်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာတော့ သူဟာ သီချင်းရေးရတာတွေ သီချင်းဆိုရတာတွေလုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့် စိတိဖိစီးမှု့တွေရခဲ့ပြီးအရမ်းကိုထွက်ချင်ပေမယ့် ဒီရိုးကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့
ကူညီဖေးမမှု့တွေနဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ သံယောဇဉ်တွေကြောင့်
တကယ်တော့ gary ဟာ အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းက သူ့မှာဆုံးဖြတ်ချက်
တစ်ခုရှိနေလောက်ပါပြီ ဒီအပိုင်းလေးကြည့်ပြီးရင် runner fan
တွေတကယ်ကို မျက်ရည်ကြရမယ့်အပိုင်းလေးပါ သူတို့တွေဟာတကယ်ကိုတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အနစ်နာခံ
ကူညီဖေးမ စောင့်ရှောက်ပြီးမှ ဒီလိုအောင်မြင်တဲ့ရှိုးကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတာပါ အရင်ကလည်းကြည့်ခဲ့ဖူးပါတယ် ဒီရက်ပိုင်းခံစားချက်နဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ မျက်ရည်တောင်ကြမိပါတယ် အားလုံးလဲအတူတူခံစားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်
Translated by Sai Kyaw Lin(SKL)
Encoded by Su Su
With Yoteshin Portal Download with yoteshin Portal
ယှဉ်​ပြိုင်​​ဆော့ကစား ကြယ်​ပွင့်​များ အပိုင်း ၃၂၂
Guest - Park Mi Sun, Ye Ji Won, Kang Min Kyung, Yura, Son Yeon Jae.
ကျင်းပသလိုမျိုးဆော့ရတဲ့အပိုင်းပါ field day ဆိုပြီး
အမှတ်တရဆော့ကြတာပါ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ မိန်းခလေးဧည့်သည်တွေပဲ
လာရောက်ဆော့ကစားကြတာပါ မိန်းခလေး အသင်းနဲ့ ယောကျာင်္းလေးအသင်းဆိုပြီး နှစ်သင်းခွဲပြီးယှဉ်ပြိုင်ကြပါတယ် တစ်သင်းဆီမှာ စပိုင်ခေါင်းဆောင်တွေရှိပါတယ် စပိုင်ခေါင်းဆောင်တွေက နောက်ထပ်
စပိုင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ကိုထပ်ရွေးချယ်ပြီးယှဉ်ပြိုင်ရပါတယ် စပိုင်မစ်ရှင်တွေကလျှို့ဝှက်မစ်ရှင်တွေထမ်းဆောင်ပြီး ကျန်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့အသင်းမစ်ရှင်တွေကိုထမ်းဆောင်ရမှာပါ
နောက်ဆုံးမှာတော့ စပိုင်ဘယ်သူလဲဆိုတာခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ အသင်းက အနိုင်ရရှိမှာပါ ကဲ ဘယ်အသင်းက အနိုင်ရရှိပြီး ဘယ်စပိုင်က မစ်ရှင်တွေအောင်သွားမလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ကြပါအုံးနော် Translated & Review by Ayenyeing Thu
Encoded by Thit San Khank
With Yoteshin Portal
Video Down ရန်​
ယှဉ်​ပြိုင်​​ဆော့ကစား ကြယ်​ပွင့်​များ အပိုင်း ၂၅၁
Guests - Byul (Haha's wife), Kim So Hyun နဲ့ Son Joon Ho
Special Appearance: Song Joong Ki, Jo In Sung & Im Ju Hwan
ဒီအပိုင်းလေးကတော့ runner တွေအရမ်းကိုမျှော်လင့်နေတဲ့ အပိုင်းလေးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်
ပြိုင်ပွဲနာမည်က စုံတွဲပြိုင်​ပွဲ ပါ
နာမည်လေးအတိုင်းပဲ စုံတွဲတွေ အတွဲတွေတွဲပီးယှဉ်ပြိုင်ရပါတယ်
(အတွဲမရတဲ့လူတွေ ကတော့ ဘယ်သူတွေဖြစ်မယ်ထင်လဲ )
အားလုံးရဲ့ အချစ်တော်လေး running man ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းလေး
Song joon ki လည်းလမ်းကြုံရင်း ဝင်​လာခဲ့တာပါ
ဂိမ်းရဲ့ အစပိုင်းမှာတော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ အတွဲတွေဟာမစ်ရှင်တွေပြုလုပ်ပြီး
တစ်တွဲနဲ့ တစ်တွဲယှဉ်ပြိုင်ကြတယ်ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာ တော့ ဒရမ်မာဇတ်ကားလေးတစ်ပုဒ် ကို ကြည့်နေရသလိုပဲ ပါဝင်ကစားကြတဲ့
running man အဖွဲ့ဝင်တွေရော ကြည့်ရှုသူ runner တွေကိုရော
အရမ်းကို စိတ်လှုပ်ရှား ပျော်ရွှင်ပြီး မျက်ရည်လည်ရလောက်အောင်ကို
ထူုးခြားမှုကို ခံစားရမှာပါ ကြည့်ရတာ အရမ်းကို ကောင်းတဲ့ အပိုင်းလေးပါ
Translated by Sai Kyaw Lin
Format: MP4( 480p and 360p)
With Yoteshin Portal Video download link
Running Man Ep-52
ယှဉ်​ပြိုင်​​ဆော့ကစား ကြယ်​ပွင့်​များ (အပိုင်း ၅၂)
(Running Man အမဲလိုက်​ခြင်း) *Please do not REUPLOAD on facebook & anywhere
copyright belongs to Copyright by RM MMSUB TEAM*
Member ​တွေက Mission စတင်​ကတည်း အံစားတုံးနဲ့ ​နေခဲ့ရမယ့်​
Mission ကိုစတင်​ကစားခဲ့ကြပါတယ်​ ပြီး​တော့
ရထားစီးပြီး မှတ်​တိုင်​တခုဆီမှာ ဘယ်​သူ​နေရမလဲဆိုတာ
အံစားတုံးနဲ့ဆုံးဖြတ်​ပါတယ်​ ​မှတ်​တိုင်​မှာ Out ဆိုတဲ့
ဘက်​ကျတာနဲ့ ဆင်​​နေခဲ့ရပြီး no တခုရခဲ့ကြပါတယ်
​ ပြီး​တော့ သတ်​မှတ်​တဲ့ Mission ​နေရာဆီသွားရပါတယ်​
ဒီ No က ဘာလို့ဖို့​ပေးတာလဲ? ​
နောက်​ဆုံးမှာ ဘယ်​လို​မှထင်​မှတ်​မထားဘဲ ကြောက်​စရာ​ကောင်းတဲ့
Mission မျိုးနဲ့​တွေ့ကြုံမလဲ? ဘယ်​သူက Winner ဖြစ်​မလဲဆိုတာ
Translate- AHM ( Ab C Wař)
Encoded - Thomas Nicolas ACM
Review - Nay Thu Rain
Duration - 1hr.20min.49s
(480p or 360p)
>>> ဒီကိုနှိပ်​ <<<
ယှဉ်​ပြိုင်​​ဆော့ကစား ကြယ်​ပွင့်​များ (အပိုင်း-၃၂၁)
Guests-Solbin (Laboum), Lee Kyu Han, Park Na Rae, Park Soo Hong, Yang Se Chan
ဒီအပိုင်းကတော့ runner တွေဟာ ခရီးထွက်သလို မစ်ရှင်တွေလုပ်ရတာပါ သူတို့တွေဟာ အရင်ဆုံးပိုက်ဆံတွေရှာရတယ်
ဒေါ်လာလို မျိုးပိုက်ဆံကိုမှ သူတို့က R ပိုက်ဆံပါ ပြီးရင် အိမ်ကြီးထဲမှာပဲ
ဒီပွဲမှာ ထူးခြားတာက နိုင်တဲ့လူကိုဆုမပေးပဲ
ရှုံးတဲ့လူကိုပြစ်ဒဏ်ပေးတာပါ ကဲဘယ်သူတွေ အပြစ်ပေးခံရမလဲဆိုတာ
*** အများကြီးညွန်းမပေးတော့ဘူးနော် အရမ်းကိုရီရပါတယ် ***
အညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်​သူက Ayenyeing Thu ပါ
Translate by Ayenyeing Thu
Special Thank for Yoteshin portal =============================
Video Download link (480p or 360p)
Running Man Ep-277
Running Man and Zombie War
ဒီပိုင်းလေးက တော့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြည့်နဲ့ ကြည့်ရမည့်အပိုင်းလေးပါ
(ကြည့်ရင်းနဲ့ လိုက်မအော်မိကြစေနဲ့နော် )
နာမည်လေးအတိုင်းပဲ runner တွေနဲ့ zombieတွေ ရဲ့စစ်ပွဲပါ တစ်ရက်မှာ ဆိုးလ်မြို့မှာရှိတဲ့ ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုမှာ zombie ဗိုင်းရစ်
တွေ့ရှိတယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေပျံ့သွားပါတယ် အစိုးရဟာ ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ ဆိုက်ဘာကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ကိုတာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်
နောက်ပိုင်းမှာတော့ zombie ဗိုင်းရစ်ဟာ တကယ်ပျံနှံသွားပြီး မထင်မှတ်ထားတဲ့ဆန်းကျယ်မှု့တွေဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ် ဒါနဲ့ပဲ အစိုးရဟာ
zombieတွေကို ရှင်းလင်းပြီး ဆေးတွေ ရှာဖို့ အတွက် running man အဖွဲ့ကို တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါတော့တယ် သူတို့အဖွဲ့ဟာ zombie တွေရှိတဲ့ အဆောက်အဦးထဲကိုဝင်ပြီးတော့ zombie တွေကိုလည်းရှင်းပစ်ရမယ်
မစ်ရှင်တွေလည်းလုပ်ရမယ် သိကြတဲ့ အတိုင်းပဲ zombie ကိုက်ခံရတဲ့လူဟာလည်း မကြာခင်မှာ zombie ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ သူတို့ရဲ့မစ်ရှင်တွေ မပြီးခင်မှာ
runner တွေအားလုံး zombie ဖြစ်မှာလား ဒါမှမဟုတ်
ဘယ်သူတွေကျန်မှာလဲ ဆိုတာကတော့ အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားပြီး ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ကြည့်ရမယ့်အပိုင်းလေးပါ
Translated by - SKL
Encoded by - Thomas Nicolas ACM
Review - AyenyeingThu
Duration - 1h.24min.02s
Partners - Nicolas Bryne(Yoteshin portal)
Special Link Download 👇👇
One Click Download (Snaptube or uc browser)
Running Man Ep - 204
Running Man Episode 204 ပါ Guest- Yu Seung Soo
Guest အနေနဲ့ကတော့ yu Seungsoo တစ်ယောက်တည်းပါဝင်ပါတယ်
running man ချစ်သူတွေအရမ်းတောင်းဆိုနေကြတဲ့ အပိုင်းလေးပါ
စနိုးဝှိုက်နဲ့ လူပုလေး ခုနှစ်ယောက်ပါ ဂျီဟိုက မင်းသမီးလေး စနိုးဝှိုက်ပါ
ကျန်တဲ့လူတွေကတော့ လူပုလေး ခုနှစ်ယောက်ပါ ပုံပြင်လေးထဲက အတိုင်းပဲ
စနှိုးဝိုက်ဟာ ပန်းသီးစားမိလို့အဆိပ်မိသွားတယ် လူပုလေးခုနှစ်ယောက်က
အနာဂတ်ကိုသွား မစ်ရှင်တွေထမ်းဆောင်ပြီး စနှိုးဝှိုက်လေးကိုကယ်တင်ရမှာပါ
စနှိုးဝှိုက်ကလေးကိုရော ကယ်တင်နိုင်မှာလား ဆိုတာ ကိုကတော့
monday couple ရဲ့ ဂယ်ရီကြီးတစ်ယောက်တော့ဒီအပိုင်းမှာ
အညွှန်​က Aye Nyeing Thu ဖြစ်​ပြီး ဘာသာပြန်​သူက​တော့ ယွန်​သံစဉ်​ပါ
*ယွန်းသံစဉ်​ ရဲ့ ပထမဆုံးဘာသာပြန်​မှုကို အား​ပေးကြပါဦး *
Translator - ယွန်းသံစဉ်​
Encorder - Thomas Nicolas ACM
Duration - 1.30.16
Quality - 360
Pcloud (305 MB)
Running Man EP-320
Guest -Yoo Hae Jin, Cho Yoon Hee, Lee Jun Lim, Ji Yeon
ပထမဆုံးပြောချင်တာကဒီအပိုင်းရဲ့ ဂိမ်းစီစဉ်သူကို အရမ်း ချီးကျူးတယ် ပြီးတော့ တစ်ခုသိရတာက ကိုကီးယားတွေဟာ သူတို့ ဘာသာစကားကို အရမ်းတန်းဖိုးထားတယ်ဆိုတာပဲ အစက နောက်ဆုံးပိုင်းက ဂိမ်းနဲ့မဆိုင်ပဲ စကားတွေပြောနေလို့ ဘာသာမပြန်ဖို့ စဉ်းစားခဲ့ပါတယ် အက်မင် ကျေးဇူးကြောင့်ပြန်ဖြစ်သွားတာပါ အရမ်းကို အဓိပ္ပါယ်ရှိပြီး သူတို့နိုင်ရဲ့ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေကို တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာ သိခွင့်ရပါတယ် ဒါ့ကြောင့်ပြောချင်တာက ဂိမ်းပြီးသွားပေမယ့် အဆုံးထိကြည့်ပေးပါ ဒီအပိုင်းမှာတော့သူတို့ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အခြေခံ ဗျည်း ၁၄ လုံးကိုပဲ အခြေ ခံပြီးဆော့သွားတာပါ အရမ်းကြိုက်တဲ့ အပိုင်းထဲမှာပါ ပါတဲ့ Guest တွေလည်းအရမ်းကိုတော်ပါတယ် သူတို့နိုင်ငံရဲ့ အခြေ ခံဗျည်း ၁၄ လုံးကိုအခြေ ခံပြီးဆော့တယ်မစ်ရှင်ကတော့ ဗျည်း၁၄လုံးကို လိုက်ပြီးစုဆောင်းရမယ် သဲလွန်စတွေရတယ် ပြီးတော့ ပထမဆုံးမစ်ရှင်ပြီးရင် ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ အသင်းဝင်တွေကိုလဲခွင့်ရှိပါတယ် (ဘယ်သူလဲခံရမယ်ထင်လဲ?)မစ်ရှင်ပြီးရင်လဲ နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲအတွက် အခွင့်အရေးတွေ ရမယ်
မစ်ရှင်တွေပြီးတိုင်းမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ဗျည်းတွေရပြီးအခွင့်အရေးကတ်တွေကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိမယ် အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အပိုင်းပါ ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ကြပါအုံး သမိုင်းကြောင်းတွေပြန်တဲ့နေရာမှာ အမှားတွေပါရင်တောင်းပန်ပါတယ် အညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်​သူက​တော့ Aye Nyeing Thu ပါ
Translator: Aye Nyeing Thu
Encorder: Thomas Nicolas ACM
Pcloud Link (327 MB)
Running Man Ep - 319
Theme - Running Man TV Part-2
Running Go Guest(s): Cho Jae-hyun, Chae Soo-bin
Running man Ep -319
(Copyright မထိခင်​ထိ ​ပေါ့)
၃၁၈ ကြည့်ပြီးမှ ဒီအပိုင်းကိုကြည့်သင့်ပါတယ်
လတ်​တ​လောက ​ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ Pokemon Go
Running Man TV part -2
ဒီအပိုင်းကတော့ ရိုက်ကူးရေးတွေစကတည်းက လူတွေအရမ်းကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ အပိုင်းလေးပါ guest ပေါင်း ၁၀၂ ယောက် လာကစားတာပါ
အရင် ပြီးခဲ့တဲ့ အပါတ်က လုပ်ခဲ့တဲ့ မစ်ရှင်တွေရဲ့ ရလဒ်အပေါ်မူတည်ပြီး ဆက်ကစားရတာပါ guest တွေအများကြီးနဲ့ ဘယ်လို ဘယ်လိုကစားမှာလဲ ဘယ်လိုမစ်ရှင်တွေလုပ်ရမှာလဲ ဘယ်သူတွေကအနိုင်ရမှာလဲ
စကားမစပ် ဂွမ်​ကတော်တွေ ပါရင် စိတ်ထိန်းပြီးကြည့်ကြနော်
အညွှန်းက​တော့ နဲ့ ဘာသာပြန်​သူက​တော့ Ayenyeing Thu ပါ
Encorder က Su Su ပါ
Uploading... Posted by